Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab oo Dagaal kula wareegay gacan ku haynta degmada Shibis oo ay horay u joogeen Maleeshiyaadka Xukuumada Ridada. | Halganka Online
Posted on Maarso 31, 2010 by halganka
dagaallo culus ayaa saaka aroortii ka dhacay xaafado katirsan degmada Shibis magaalada Muqdisho kuwaasi oo u dhexeeyay xoogaga Islaamiyiinta iyo Maleeshiyo taabacsanayd dowladda KMG ah.
dagaalka oo socday muddo Hal saac iyo bar ah ayaa yimid kadib markii guutooyin katirsan ciidanka Shabaabul Mujaahidiin ay weeraro ku qaadeen fariisimo ay Maleeshiyaadka DKMG ah ku lahaayeen degmada Shibis.
Sida ay xaqiijiyeen saraakiil Shabaab katirsan waxaa ciidanka Dowlada ridada ah lagala wareegay gacan ku haynta xarunta degmada Shibis iyo wadooyinka soo gala kadib markii uu adkaaday dagaalkii saaka.
Ciidanka Al Shabaab oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ayaa gudaha ugalay degmada Shibis iyagoona difaacyo dhigtay Jid cadayaasha gala guriga Habar Khadiijo degmada Shibis, rasaas teel teel ah oo ay is dhaafsanayaan maleeshiyada Dowlada riadada ah iyo Mujaahidiinta al Shabaab ayaa laga maqlayaa dhabarka dambe ee Habar Khadiijo waxaana degmada Shibis inteeda badan la wareegay Mujaahidiinta.
Dhinaca kale dagaal culus ayaa isna saaka ka dhacay Isgoyska Maanabooliyo degmada Shibis kaas oo u dhexeeyay islaamiyiinta iyo ciidanka Dowladda, xoogaga Hubaysan ee islaamiyiinta ah ayaa laxaqiijiyay in ay la wareegeen gacanta ku haynta Isgoyska nasiib Buundo gaar ahaan difaac ay Maleeshiyaadka DKMG ah ku lahaayeen daarta Cali Jabiin taas oo ka dhigay in Maana Booliyo liiftahay oo aysan jirin cid isticmaali karta.
Taqadumkan ay sameeyeen xoogaga Islaamiyiinta ayaa kusoo aadaya xilli uu fashil kusoo dhamaaday dagaal ay dhawaan Saliibiyiinta AMISOM kusoo qaadeen degmooyinka dhaca waqooyiga magaalada Muqdisho.
« Meydka wiil da’yar oo lagala baxay Xubnaha ugu muhiimsan jikiisa oo lasoo dhigay meel udhow garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. DowladdaXukuumada Saliibiga Kenya oo Diiday in ay Dowladda Ridada ah Ku wareejiso Maleeshiyaad dhawaan lagu tababaray gudaha dalkeeda. »